Uphando oluSisiseko luLuguqula njani uphawu lweeNkokeli zoShishino Martech Zone
Uphando oluSisiseko luLuguqula njani uphawu lweeNkokeli zoShishino
Lwesine, Disemba 5, 2013 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Abathengisi baphethukele kwintengiso yomxholo, kwimidiya yoluntu, kwintengiso yemveli kunye nezinye iindlela ezininzi zokuthengisa ukwakha ubudlelwane nabantu ekujoliswe kubo. Iingcali zentengiso zihlala zikhangela ubuchule obutsha kunye nezicwangciso zokwakha igunya labo kunye nesazisi. Enye indlela eyahlukileyo ethi iinkampani ezininzi zibonise ubume bazo njenge iinkokeli zeshishini ngokwenza eyodwa uphando oluphambili inokuthenjwa kwaye iluncedo kubafundi babo.
Inkcazo yoPhando lweMarike yasePrayimari: Ulwazi oluvela ngqo kumthombo- oko kukuthi, abathengi abanokubakho. Ungaluqokelela olu lwazi ngokwakho okanye uqeshe omnye umntu ukuba akuqokelelele lona ngophando, amaqela ekugxilwe kuwo kunye nezinye iindlela. Inkcazo ngoSomashishini
UJanna Finch, uMhleli oLawulayo kwi Ingcebiso ngeSoftware, inkampani yophando enikezela ngesimahla uphononongo lwesoftware yentengiso, kutsha nje wenze ingxelo ebonelela ngemizekelo emine yeenkampani ezisebenzisileyo uphando oluphambili njengesicwangciso esisebenzayo sokuthengisa. Sigqibe kwelokuba sidibane noFinch kwaye sibone ukuba loluphi ulwazi olongezelelekileyo ekufuneka abelane ngalo malunga nokusebenzisa esi sicwangciso. Nantsi into ebefanele ukuyinikela:
Uphando oluphambili lunokunceda njani ukwakha igunya lophawu?
Abathengisi bayazi ukuba ukupapashwa kolwazi ekwabelwana ngalo ngokuphindaphindiweyo akwanele ukwandisa ukusebenza kokukhangela okanye ukuphuhlisa ukufundwa okuvelisa izikhokelo kunye nokuguqulwa. Le ayisiyiyo iresiphi yokuphumelela, kwaye ayizukuyenza Yahlula uphawu lwakho kwezinye iimveliso.
Umgangatho ophezulu, umxholo wokuqala yindlela efanelekileyo yokuphakama ngaphezu kwengxolo yabakhuphisana nabo kunye nophando oluphambili luyifanele ngokupheleleyo ibhilikhwe. Uphando olusisiseko, xa lwenziwe ngokufanelekileyo, lubonelela ngethemba lakho kumxholo owahlukileyo ongafumanekiyo kwenye indawo kuba umtsha.
Ukupapasha uphando oluphambili kunezibonelelo ezibalulekileyo:
Umxholo kwabelwana ngayo: Abantu bahlala bekhangela izinto ezintsha ezinomdla kwaye bayayiphepha imixholo ehanjiswe ngamakhulu amaxesha ngokujikeleza okwahlukileyo okwahlukileyo. Uphando loqobo lunethuba elingcono lokuba nomdla kwaye lube luncedo, oko kuthetha ukuba abantu baya kuba nakho ukuyithumela i-tweet, njengaye, bayicofe okanye babhloze ngayo.
It ibalaselisa igunya lakho Ukuqhuba iprojekthi ephambili yophando ayingomsebenzi olula. Ifuna iiyure ezininzi zomntu kunye nokuzinikezela. Abantu bayakuqonda oku kwaye bayazi ukuba ukuba inkampani yakho ibinzulu ngokwaneleyo ukuba ingenza iprojekthi enkulu yophando, unokuba unegunya kulo mbandela.
Igunya lokwakha nalo linalo Iziphumo ze-SEO. Okukhona abantu bethemba uphawu lwakho kwaye behlonipha umxholo wakho, kokukhona izinto zakho ziya kwabiwa kwaye zidityaniswe. Iinjini zokukhangela zichonga ukuba ukuba umxholo wanokwabiwa kakhulu, kusenokwenzeka ukuba sisibonelelo esibalulekileyo. Ukuba uGoogle ubona olu nxibelelwano kumxholo wakho, uphawu lwakho luya kuthwala igunya elingaphezulu kwaye liqale ukubonakala liphezulu kwii-SERPs kwaye abantu abaninzi baya kundwendwela indawo yakho. Iindwendwe ezininzi zihlala zithetha ukuguqulwa okungakumbi.
Kutheni le nto ukwakha uphawu lwegunya kwi-Intanethi kubalulekile kumashishini?
Abantu bathambekele ekufuneni iinkampani kuba bayayithemba i-brand yabo, okanye banikezela ngolwazi ababelukhangela, okanye banamava amahle adlulileyo. Ngokwakha igunya elingaphezulu lophawu, wakha nentembeko. Xa abantu beyithemba inkampani yakho kwaye bekujonga njengenkokeli, inokukhokelela ekukhokeleni ngakumbi nakwingeniso.
Oku kubaluleke ngakumbi kwi-Intanethi. Okugunyazisa ngakumbi uphawu lwakho, kokukhona kuya kuba kwinqanaba eliphezulu kwiziphumo zokukhangela. Ukuphakama kweshishini lakho kwiphepha leziphumo zophando lukaGoogle, kokukhona uphawu lwakho lubonakala, kwaye ukubonakala okukhulu kuthetha ingeniso ethe kratya. Ukubeka ngokulula, akukho mntu wakha wathenga kwiwebhusayithi angayifumaniyo.
Ngaba ukhona umzekelo wophawu olwenzileyo ngempumelelo esi sicwangciso sentengiso?
Kukho iinkampani ezininzi ezisebenzise ngempumelelo uphando oluphambili ukwakha igunya labo lophawu. Enye inkampani iye yaphumelela ngokumangalisayo ekusebenziseni esi sicwangciso- moz. IMoz ibiligunya lokusebenza kweinjini yokukhangela (i-SEO) phantse ishumi leminyaka. Nangona kunjalo, kwilinge lokugcina imeko yabo njengenkulumbuso yokuya kwimithombo yolwazi ye-SEO, nabo bajonge kuphando lokuqala.
UMoz uphonononge ngaphezulu kwe-120 yabathengisi abaphezulu be-SEO ukuqokelela uluvo lwabo ngaphezulu kwezinto ezingama-80 zokukhangela kwiinjini yokukhangela. UMoz uqokelele idatha kwaye senze iigrafu ekulula ukuzifunda kunye nesishwankathelo sedatha ukufundwa okuphezulu kunye nokwabelana. Isigqibo sabo sokujika kukhangelo olusisiseko siphumelele kakhulu kuba banike abathengisi be-SEO uphando olusebenzayo nolunokuthenjwa ekungekho mntu unokubonelela ngalo. Le nzame ibazuze phantse amakhonkco angama-700 kunye nangaphezulu kwama-2,000 ezabelo zentlalo (kunye nokubala!). Olu hlobo lokubonakala alonyusi kuphela igunya labo lophawu, kodwa lukwalomeleza igama labo njengomthombo odumileyo wolwazi lwe-SEO kunye neendlela ezilungileyo.
Zeziphi iingcebiso onazo kwezinye iinkampani ezijonga ukusebenzisa uphando oluphambili ukwakha igunya labo lophawu?
Qonda ukuba ukwenza uphando olukumgangatho ophezulu kuthatha ixesha elininzi kunye nomzamo. Njengayo nayiphi na iprojekthi ephambili, ubuchule kunye nocwangciso zibalulekile. Nantsi imibuzo embalwa ekufuneka uzibuze yona ngaphambi kokuba uqalise ukuqokelela idatha:
Yintoni endifuna ukuyifumana?
Ndingaluqokelela njani olu hlobo lolwazi? Zibuze ukuba yeyiphi eyona ndlela yokuqokelela idatha kukwenza isaveyi ekwabelwana ngayo, okanye ukwenza udliwanondlebe neqela elincinci leengcali, okanye ukuba ungaziqokelela na iinkcukacha ngokwenza umbono wakho.
Iziphumo zeli projekthi ziya kuba luncedo njani kubathengi bam okanye kubaphulaphuli? Ungaya kuyo yonke intshukumo kunye nokusebenza nzima ukuqokelela idatha esemgangathweni, kodwa ukuba ayiloncedo, inomdla kwaye yabiwa ngokulula, inganceda njani ukwakha igunya lakho?
Ukuba uyayiphendula le mibuzo sele ungaphambi kwabaninzi abakhuphisana nabo.
Ngaba ukhe wasebenzisa uphando oluphambili ukuphakamisa igunya lakho lophawu? Nceda wabelane ngebali lakho okanye izimvo zakho apha ngezantsi.
tags: UJanna FinchmozUphando lweNtengiso ePrayimariuphando oluphambiliuphandoIingcebiso zesoftware
I-WordPress: Izizathu ezi-3 zokufaka jetpack Ngoku!
Njengoko kwaxelwa kwangaphambili, ukuThengiswa kweeholide zika-2013 kwaHamba ngeFowuni